Uyihlela njani imifanekiso kwi-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Indlela yokuhlela imifanekiso kwi-Instagram?
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 237
I-Instagram, ekubeni sisicelo apho upapasha imifanekiso kunye neevidiyo, unethuba lokuhlela olu hlobo lomxholo ngaphambi kokuba ulilayishe kwinethiwekhi, usebenzisa iziphumo ezahlukeneyo kwimifanekiso oyithandayo. Ngapha koko, ujongano lwe-Instagram lubonelela ngenani elikhulu lezixhobo zokuhlela ukwenza imifanekiso enobungcali.
Kungenxa yokuba, ngaphandle kwamathandabuzo, uya kufumana inani elifanelekileyo lokukhetha ongazukufuna esinye isicelo esongezelelweyo ukuhlela iifoto zakho. Kwaye ukuba awufuni ukwabelana ngomxholo, kodwa sebenzisa nje umhleli, unokukhuphela umfanekiso ohleliweyo ngqo kwisixhobo sakho.
Nangona kunjalo, ukufumana umfanekiso okwinqanaba lobungcali kuya kuxhomekeka kubuchule bakho bokuhlela.. Emva koko, uya kufumana ezinye iinkqubo ukuze ufunde ukuhlela imifanekiso yakho kwi-Instagram ngendlela esisiseko.
Qala iposti entsha
Konke kuqala ngokuqala kopapasho olutsha. Khangela i icon entsha yeposi.
Xa uqala ukupapasha, i-interface iya kukubonisa imifanekiso onayo kwigalari yesixhobo sakho. Khetha umfanekiso ofuna ukuwuhlela.
Qala ukuhlela umfanekiso:
Khetha phakathi kweefilitha ezenzelwe usetyenziso. Unokukhetha ngaphezulu kweefilitha ezingama-40 ezahlukeneyo, ngokucinezela kabini, unokutshintsha ubungakanani becebo lokucoca ulwelo.
Ngokukhetha "uhlengahlengiso" unokutshintsha ukujongwa komfanekiso, kunye nokulungisa umbono womfanekiso, uzama ukuyibeka embindini ukuba umfanekiso woqobo ubanjiwe.
Kwisixhobo ngasinye uyakufumana ibar yescroll onokuyilungisa ngayo. Nje ukuba useto lube ngokokuthanda kwakho, kuya kufuneka ucofe iqhosha "krelekrele".
d. Ngaphakathi "kombala" unokufaka izinto ezibonakalayo ezinomtsalane. Nantsi le nkqubo isebenzisa uhlengahlengiso lombala kuzo zombini izibane kunye nezithunzi, ukuvelisa umfanekiso apho iindawo ezikhanyayo zinetoni ezifudumeleyo kunye nezo zimnyama, iithowuni ezifudumeleyo.
Khetha inqanaba lokukhanya elifanelekileyo lomfanekiso. Ngokukwanjalo, unokukhetha amanqanaba ahlukeneyo okuqaqamba, umahluko, isakhelo, ubushushu, ulwakhiwo, izithunzi kunye nezibane. Sebenzisa olu khetho unokutshintsha ukucaca kunye nokungafani komfanekiso, kunye nefuthe le-HDR ngokwandisa izithunzi kunye nokunciphisa izinto eziphambili.
Ngaphakathi kwicandelo lokufiphala kunye nobukhali, unokufikelela kwimifanekiso emikhulu Ukutshintsha kobunjani bomgangatho kunye nokugxila kwifoto yakho enokuyifuna
Phakathi kwamanye amacandelo okuhlela i-Instagram uya kufumana ukubekwa isicatshulwa ngaphezulu komfanekiso kwaye uvelise uyilo lwekholaji ezahlukeneyo.
Xa ukuhlela kugqityiwe, cinezela i-icon yokukhuphela umfanekiso phezulu kwesikrini okanye uqhubeke Inkqubo yokupapasha.
Lo ngumsebenzi onokuwusebenzisa kwimifanekiso yakho ngokuthe ngqo kwi-icon ekwimo yelanga ngaphezulu komfanekiso kunye nendawo embindini mnyama.
Le icon inyusa izithunzi, ukugcwala kunye nobukhali bomfanekiso ngokuzenzekelayo, ukonyusa umfanekiso kwangoko. Kukulungele ukufaka le icon ngaphambi kokuzama ezinye iindlela zokuhlela okanye ukusebenzisa iifilitha.
0.1 Qala iposti entsha
1 Qala ukuhlela umfanekiso:
1.1 Sebenzisa iLux
Indlela yokukhangela abantu abasondeleyo ngeTelegram?
Uhamba njani ngokulima iiTwitch bits?